Kinberg Batra oo aaminsan in halkaa laga sii wado kontroolka xuduudaha - Radio Sweden Somali - Raadiyaha Iswiidhen | Sveriges Radio
sawir: Annelie Frank/ Sveriges Radio
Kinberg Batra oo aaminsan in halkaa laga sii wado kontroolka xuduudaha
La daabacay tisdag 25 oktober 2016 kl 10.47
Hoggaamiyaha xisbiga Moderaterna (M) Anna Kinberg Batra ayaa taabac-san in halkooda laga sii wado howlaha ilaalinta xuduudaha u dhexeeya Sweden iyo Danmark.
– Waa qof aan fekerayn ruuxa aamin-san inay dhammaataycaqabaddii qaxootiga, sida ay sheegtay Batra oo u warrameeysay war-geeysyada Sydsvenska iyo Helsingsborgs Dagblad iyadoona middaa ku saleeysay xaaladaha ka aloosanbadda dhexe ee mediteriyaanka iyo dalka Suuriya.
Halkaay hoggaamiyaddu dhanka kale sheegtay in loo baahan yahay sidii loo adkeeynlahaa ilaalinta xudduudaha isla-markaana uu hab-sami ugu shaqeeyn lahaa suuqashaqada ee nawaaxiga buundada Öresund.
Hoggaankaxisbiga Moderaterna ayaa sidoo kale taabac-san in halkooda laga sii wadoxeerarkii qaxootiga ee la adkeeyey xilligii kuleeylaha ee sannadkan 2016. Xeerarkaasinaoo oranaya in la adkeeyo bixinta sharciga deggenaansho ee joogtada ah iyo adkeeyntasuurtagalka ey soo-galootigu kula midoobi karaan qaraabadooda.
–Dalka Sweden wuxuu u baahan yahay siyaasad qaxooti joogta ah oo xasiloon iyo incidda culeeys iyo dagaal ka soo cararta ay hesho sharci deggenaansho ee kumeel-gaar ah iyo in ciddii howl ku hesha muddada ay dalka ku sugan tahayna kusii nagaato. Waana midka aasaaska u ah xeerka, sida ay sheegtay Anna KinbergBatra, ahna hoggaamiyaha xisbiga Moderaterna.